Mauritania Oo Ku Dhawaaqday Inay Goysay Xiriirka Diblomaasi Ee Ka Dhaxeeyay Qadar | Jubbaland Media Online
Mauritania Oo Ku Dhawaaqday Inay Goysay Xiriirka Diblomaasi Ee Ka Dhaxeeyay Qadar
Mauritania ayaa ku dhawaaqay inay u goysay xiriirka diblomaasiyadeed ee ay ka dhaxeeyay Qadar sida ay sheegtay warbaahinta dalkaasi
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mauritania war qoraal ah oo ay soo saartay ku sheegtay go’aanka xiriirka diblomaasiyadeed ay ugu goysay ay u qaadatay waxa ay tilmaamtay ku adkaysiga Qadar ee “kusii socoshada siyaasadeeda.
Urdun sido kale waxa ay ay ku dhawaaqday inay hoos dhigtay heerka xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhaxeeyay Doxa.
Dhanka kale Urdun ayaa waxa kala noqotay oggollaanshihii xafiiska Al Jazeera ee ku yalaa caasimada Cammaan.
Si kastaba ha ahaatee dalalkan ayaa ah kuwo siyaasadahooda aanan u madaxbanaanayn oo qoyska reer Sucuud ay ku iibsadaan laaluush go’aanadooda siyaasadeed taas oo cadeyn u ah heerka uu gaarsiisan yahay faragalinta qaawan ee qoysaskan ka taliya imaaradahan Khaliijka ay ku hayaan dalalka kale.
Tallaabada qoyska reer Sucuud uu hormoodka ka yahay ee xiriirka diblomaasi loo goyanayo imaaradda Qadar ayaa wararka barkood ay sheegayaan in uu dabada ka riixayo Maraykanku arrinta.
Waxa warbaahinta caalamku ay sheegtay in Donald Trump bogga uu ku leeyahay Twitter ka uu qoray hadal uu ku taageeray go’aanada qoysaskani ay ugu gooyeen xiriirka diblomaasiyeed imaarada Qadar.
Waxa kale oo wararkani ay sheegeen in heshiiskii ku dhexmaray magaaladda Riyadh qoyska reer Sucuud iyo Trump ee ku kacaya lacagta khiyaaliga ah in uu ahaa mashruuc lagu laaluushay Trump oo ujeedada ka dambeeysay ay ahayd in Maraykanku uu taageero in la go’doomiyo imaarada Qadar.
Waxa sababaha ka dambeeya lagu sheegay inay kamid yihiin warbaahinta Aljazeera oo ku noqotay qoysaskan iyo reer Galbeedka laf dhuun gashay.
Waxa sido kale imaaradan Qadar ay si cad u taageertaa ururka Xamaas ee Falastiiniyiinta ee xafiis ku leh magaalada Doxa iyo ururka Ikhwaanul Muslimiinka oo qoysaskani ay dagaal adag ku hayaan.
Dhinac kale wasiirka arrimaha dibadda u qaabilsan qoyska reer Sucuud Caadil Al-jubayr ku sugan Paris ayaa waxa uu sheegay in Qadar ay joojiso taageerada ay siiso Ikhwaanul Muslimiinka iyo ururka Xamaas oo isagu dagaal kula jira guumaysiga Yuhuuda,waxana ninkani u muuqdaa afhayeen u hadlaya Yuhuuda oo iyadu ururka Xamaas ku tilmaamta argagixiso.
Waxa sida kale warbaahinta Aljazeera ay dagaal xoog leh ku haysaa dilaaga Sisi iyo taliskiisa kaas oo Sucuudiga iyo Imaaraadka carabtu ay ku bixiyeen lacag ka badan (40$ billion) milyaar oo dollar shirqoolkii uu ku afgamibiyay dilaagani madaxwaynihii u horeeyay ee si dimuqraadiyad ah loo soo doorto taariikhda dalkaasi.